Hollywood elikhanyayo Vanity Makeup Mirror nge Lights Esibanzi Ukugqoka Ithebula-phezulu Beauty Mirror
Model Inombolo: L609
Imibala atholakalayo: silver
Hollywood STYLE IZE Mirror
Kungani izinkanyezi Kufanele usebenzise ezifana izimonyo esibukweni makeup?
I-Hollywood makeup mirror ukukhetha lokuvala ukukhanya ukukhanya kosuku, ukuze baqonde kangcono ngezinga komthunzi, izimonyo ukuqinisekisa umbala umfaniswano. Futhi ungasebenzisa esibukweni makeup esimweni amnyama.
Entsha ama LED adalwe BEAUTME kukhona amandla engeziwe-ukonga kanye imvelo, futhi kulula esikhundleni.
It has isikhala kwisitoreji makeup yakho nezinsiza. Anhlobonhlobo kanye nomklamo elula, kukhona 2 USB ezisezingeni ohlangothini wayeqamba omakhalekhukhwini nokunye.
Intelligent touch Ukufiphala design, wanelisa isidingo sakho ezahlukene ukukhanya ukukhanya ezindaweni ezahlukene for makeup.
Umklamo omuhle inikeza ephelele ngisho ukukhanyiselwa kakhulu ukuzwakala ezikhexisayo. Kuyinto Ideal for izimonyo izicelo ekhaya noma izilungiselelo okhokhelwayo!
Hollywood elikhanyayo Vanity Mirror
For Women Futhi Girls, Ukuba okunjalo A Vanity Mirror Ingabe Dream yabo
I-Hollywood isitayela makeup mirror kuyinto salon grade ucezu, kubalulekile ukwakheka nezinsiza professional inkanyezi futhi nengcweti. Uhlaka kwenziwe we eliphezulu aluminium ingxubevange futhi kanzima enkulu spray inqubo uyayilahla ikhona iminonjana yenkolo Ukuthunga ku uzimele, ukwakha uhlaka ephelele futhi bheka ngaphezulu ephezulu grade futhi emuhle.
It kuzokuvumela ukuqedela ubuhle bakho isimiso ngokuphelele, kungakhathaliseki ukuthi yisikhathi sini sosuku, akunike umuzwa inkanyezi bese dream kuyize isethi. Siyaqiniseka ukuthi izinga imikhiqizo yethu kwanele kukumangaze uma nje ukusinikeza ithuba lokuzama.
Okulandelayo: Bathroom Vanity Mirrors, Round Wall Mounted Anti Fog & Dimmer Touch Switch Mirror
Amandla: DC12V / 2A Plug-in-adaptha
3 Umbala Amazinga okushisa izibani LED: ukukhanya efudumele ophuzi (3200k) & ukukhanya efudumele emhlophe (4800k) & white usuku ukukhanya (6500k)
usayizi Glass: 697mm (L) * 547mm (H) / (27.44 "* 21,53");
usayizi yomkhiqizo: 720mm (L) * 120mm (W) * 565mm (H) /28.35 "* 4,72" * 22.2 ";
Mirror Isisindo: mayelana 9kg
1 * ukwakheka kwesibuko izibani; 1 * kithi plug-in-adaptha; 12pcs kwaholela ama; 1 * yeziqondiso
Hollywood Vanity Makeup Mirror Tabletop noma Wall ...
Hollywood Vanity Mirror, isitayela Makeup Mirrors w ...
Ize Khanyisa Ama , Makeup Mirror Nokukhanya Ama, Mirror Nokukhanya Ama , Vanity Mirror Nokukhanya Ama,